ကြှနျုပျတို့၏ တာဝနျဝတ်တရား | မြန်မာနိုင်ငံရှိဘော့ရှ်
ရရှေညျတညျတ့ံခိုငျမွဲမှု၊ စံသတျမှတျခကြျမြားနှငျ့ လေးစားလိုကျနာမှု
Bosch Group အတှကျ ရရှေညျတညျတ့ံခိုငျမွဲမှုဆိုသညျမှာ ကုမ်ပဏီ၏ ရရှေညျအောငျမွငျမှုကို လုံခွုံစိတျခရြအောငျဆောငျရှကျခွငျးအပွငျ တစျခြိနျတညျးမှာပငျ နောကျလာမညျ့မြိုးဆကျသစျမြားအတှကျ သဘာဝပတျဝနျးကငြျကို ထိနျးသိမျးခွငျးကို ဆိုလိုပါသညျ။ အသစျပွနျလညျဖွစျတညျနိုငျသော စှမျးအငျကို ပို၍ ခံနိုငျစှမျးရှိစရေနျနှငျ့ ရှေ့လြားနိုငျသော စှမျးရညျကို ပိုဘေးကငျး၊ ပိုသနျ့ရှငျး၍ ပိုတှကျခွကေိုကျအောငျ ပွုလုပျရနျနှငျ့ ပတျဝနျးကငြျကို မထိခိုကျစသေော ထုတျကုနျပစ်စညျးမြားအား လူသားအားလုံးအတှကျ ဖနျတီးထုတျလုပျပေးရနျ ကြှနုျပျတို့ ရညျရှယျပါသညျ။
လူမှုအသိုကျအဝနျးမှရငျဆိုငျနရေသညျ့စိနျခေါျမှုမြားကို ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ စီးပှားရေးကဏ်ဏမှအဓိကအားဖွညျ့ ကူညီပေးနိုငျသညျဟု ကြှနျုပျက အခိုငျအမာယုံကွညျ ပါသညျ။
Dr .Volkmar Denner စီမံအုပျခြုပျရေး ဆိုငျရာ ဥက်ကဋ်ဌ
ကြှနုျပျတို့၏ တစျကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ဝဘျဆိုကျတှငျ ပိုမိုရှာဖှလေေ့လာပါ
ကြှနုျပျတို့၏ စံသတျမှတျခကြျမြား — ကြှနုျပျတို့ အခွပွေုသညျ့အရာ
ကြှနုျပျတို့၏ စံသတျမှတျခကြျမြားက ကြှနုျပျတို့လုပျငနျးအား ဆောငျရှကျသညျ့ ပုံစံအပေါျ တနျပွနျသကျရောကျမှုရှိပါသညျ : ကြှနုျပျတို့၏ စီးပှားမိတျဖကျမြား၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြား၊ ဝနျထမျးမြားနှငျ့ လူမှုအသိုကျအဝနျးတို့နှငျ့ ဆကျနှှယျရာတှငျ ကြှနုျပျတို့ကငြ့ျသုံးသညျ့ ပညာရှငျဆနျသော ကငြ့ျဝတျမြား။
အနာဂတျနှငျ့ အကြိုးရလဒျကို အထူးအသားပေးမှု
ကြှနုျပျတို့ ဆောငျရှကျခကြျမြားသညျ အကြိုးရလဒျကို အလေးပေးပါသညျ။ ယငျးက ကြှနုျပျတို့၏ အနာဂတျကို လုံခွုံစိတျခရြစပေါသညျ။ ကုမ်ပဏီနှငျ့ ဖောငျဒေးရှငျး၏ လူမှုရေးဆိုငျရာ ပဏာမခွလှေမျးမြားအတှကျ ကောငျးမှနျသညျ့ အခွခေံတစျခုကိုလညျး ၎င်းငျးက ဖနျတီးပေးပါသညျ။
လူ့အဖှဲ့အစညျးနှငျ့ ပတျဝနျးကငြျ၏အကြိုးအတှကျ ကြှနျုပျတို့လုပျဆောငျသမြှ အရာရာကို ခငြ့ျခြိနျပွီး တာဝနျယူမှုအပွညျ့နှငျ့လုပျဆောငျပါသညျ။
ကြှနုျပျတို့၏ ကိုယျပိုငျ ပဏာမခွလှေမျးအတိုငျး ပွုမူဆောငျရှကျ၍ စှနျ့ဦးတီထှငျသူအဖွစျ တာဝနျယူထားပွီး ကြှနုျပျတို့၏ ဆုံးဖွတျခကြျနှငျ့တကှ ရညျမှနျးခကြျပနျးတိုငျမြားသို့ ရောကျရှိအောငျ ဆောငျရှကျပါသညျ။
အရေးကွီးသော ကုမ်ပဏီကိစ်စမြားကို ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာဖွငျ့ အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ ဆကျသှယျပွောကွားပါသညျ။ ဤသညျက ယုံကွညျမှုနှငျ့တညျဆောကျထားသညျ့ ဆကျဆံရေးအတှကျ အကောငျးဆုံး အခွခေံအုတျမွစျဖွစျပါသညျ။
ကြှနုျပျတို့၏ မိတျဆှမြေား၊ စီးပှားမိတျဖကျမြားနှငျ့ တရားမြှတစှာ ဆကျနှှယျဆကျဆံပွီး ဤတရားမြှတမှုကို ကြှနုျပျတို့လုပျငနျးအောငျမွငျမှုအတှကျ အုတျမွစျတစျခုအဖွစျ ရှုမွငျသုံးသပျပါသညျ။
အားထားရမှု၊ ယုံကွညျစိတျခနြိုငျမှု၊ တရားဝငျမှု
လုပျငနျပိုငျးဆိုငျရာတှငျလညျး စညျးကမျးသတျမှတျခကြျမြားကိုလေးစားလိုကျနာပွီး စညျးကမျးဘောငျအတှငျး ကြှနျုပျတို့ဆောငျရှကျပေးနိုငျသမြှကိုသာ ကတိပေးဆောငျရှကျပါသညျ။
မတူကှဲပွားမှုမှ ဆောငျကွဉျးပေးသညျ့ ကွှယျဝခမြျးသာမှုကို ကြှနျုပျတို့က အလေးထားပွီး ၎င်းငျးသညျ ကြှနျုပျတို့၏ အောငျမွငျမှုအတှကျ မရှိမဖွစျ အရေးပါသညျဟု ရှုမွငျထားသညျ့အတှကျ မတူကှဲပွားမှုကို အားပေးပါသညျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတခုရရှေညျတညျတံ့ ရနျ ရိုးသားဖွောငျ့မှနျပွီးတရားမြှတသညျ့ ဆောငျရှကျကွိုးပမျးမှုကသာ အထိရောကျဆုံးဖွစျပါတယျ ။
ကြှနုျပျတို့၏ ရညျမှနျးခကြျဖွစျသော "We Are Bosch" ကို မွငျယောငျပါ
Bosch ၌ ဥပဒကေို လေးစားလိုကျနာခွငျးသညျ ကုမ်ပဏီ၏ စံသတျမှတျခကြျမြားတှငျအဓိကကသြောကဏ်ဍတစျခုဖွစျပါသညျ။
လုပျငနျးဆောငျရှကျရာတှငျ တစျကမ်ဘာလုံးအတှကျ အကြုံးဝငျသောစညျးကမျးခကြျမြား၏ ရညျရှယျခကြျမှာ ကြှနုျပျတို့၏ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ကုမ်ပဏီနညျးတူ ကြှနုျပျတို့၏ ဖောကျသညျမြားနှငျ့ မိတျဖကျမြားကိုပါ ကာကှယျပေးရနျဖွစျပါသညျ။
"We Are Bosch" ဟူသော ကြှနုျပျတို့၏ ရညျမှနျးခကြျအတိုငျး "ကြှနုျပျတို့ ဆောငျရှကျပေးနိုငျသညျ့ အရာကိုသာ ကတိပေး၍ သဘောတူညီခကြျမြားကို ပူးပေါငျးမှုအဖွစျ ကြှနုျပျတို့ လကျခံပွီး ကြှနုျပျတို့၏ လုပျငနျးကိစ်စမှနျသမြှ၌ ဥပဒကေို အလေးထားပွီး လိုကျနာပါသညျ။" ဤမူဝါဒ၏ အရေးပါမှုကို ထငျရှားစရေနျ တစျကမ်ဘာလုံးတှငျ အကြုံးဝငျသော လုပျငနျးကငြ့ျဝတျစညျးကမျးတှငျ တရားဝငျသတျမှတျခကြျမြားနှငျ့ ကငြ့ျဝတျဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ စပျလဉြျး၍ ကြှနုျပျတို့၏ ရပျတညျမှုကို အကဉြျးခြုံး၍ ဖောျပွထားပါသညျ။ လုပျငနျးကငြ့ျဝတျစညျးကမျးသညျ လုပျငနျးကို မညျသို့ဆောငျရှကျမညျကို လမျးညှှနျပေးသညျ့ အရာတစျခု ဖွစျပါသညျ။
Bosch စီမံအုပျခြုပျရေးဆိုငျရာဘုတျအဖှဲ့သို့ တိုကျရိုကျအစီရငျခံတငျပွရသော စညျးမဉြျးစညျးကမျးဆိုငျရာ အရာရှိမှ ခမြှတျထားသညျ့ တကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ စနစျတစျခုရှိပါသညျ။ ဋ်ဌာနခှဲမြားနှငျ့ ဒသေအားလုံးတှငျ စညျးမဉြျးစညျးကမျးဆိုငျရာ စောငျ့ကွညျ့တာဝနျယူသူမြားလညျးရှိနပေါသညျ။ ကြှနျုပျတို့၏စံသတျမှတျမှုမြား အခွခေံသညျ့စနစျကို ပံံ့ပိုးပေးရနျ အခွခေံသဘောတရားတှငျ တားဆီးကာကှယျရေးနှငျ့ စစျဆေးခွငျး ၊ အရေးကွီးသောဒသေမြားတှငျအလှညျ့ကဆြောငျရှကျ မှုမြား အပွငျ ပုံမှနျစစျဆေးခွငျးမြားကို စီစဉျဆောငျရှကျထားပါသညျ။မဖွစျမနဆေောငျရှကျရသော စညျးမဉြျးစညျးကမျးဆိုငျရာ သငျတနျးပို့ခမြှုမြား လညျးရှိပါသညျ။ စီမံခနျ့ခှဲရေးမြား ၊ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေး အရာရှိမြားအကွား စညျးကမျးဆိုငျရာ ခေါငျးစဉျနှငျ့ အတှေ့အကွုံတို့ကို ဆှေးနှေးစသေညျ့ “ စညျးကမျးဆိုငျရာ စကားဝိုငျး”တစျခုကိုလညျး စီစဉျပေးထားပါသညျ။
လေးစားလိုကျနာရေး စနစျတှငျ အဖှဲ့အစညျးမြား၊ စီးပှားမိတျဖကျမြားနှငျ့ ပွငျပအဖှဲ့အစညျးမြားအနဖွေငျ့ မူမမှနျမှုမြားကို အခြိနျမရှေး အစီရငျခံတငျပွရနျအသုံးပွုနိုငျသညျ့ အစီရငျခံတငျပွရေး အရေးပေါျဖုနျးလိုငျးတစျခုလညျး ပါဝငျပါသညျ။ တာဝနျသိပွီး တရားဥပဒအေား လေးစားလိုကျနာသညျ့ အမူအကငြ့ျက ကုမ်ပဏီအတှငျး၌ပငျ ရပျတနျ့မသှားပါ။ ယငျးကို စိတျထဲတှငျထား၍ Bosch နှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရာတှငျ လိုကျနာရမညျ့ မူဝါဒမြားနှငျ့ သတျမှတျခကြျမြားကို သတျမှတျဖောျပွသညျ့ ပစ်စညျးပေးသှငျးသူ ကုမ်ပဏီမြားအတှကျ ကငြ့ျဝတျစညျးကမျးတစျခုကို ကြှနုျပျတို့ သတျမှတျထားရှိပါသညျ။ ကြှနုျပျတို့၏ ပစ်စညျးပေးသှငျးသူ ကုမ်ပဏီမြားအနဖွေငျ့ ဤမူဝါဒမြားအား လေးစားလိုကျနာကွောငျး သခြောအောငျဆောငျရှကျရနျ ကြှနျုပျတို့က ပုံမှနျစစျဆေးလေ့ရှိပါသညျ။ ထိုမြှ အမွနျရှေ့လြားတိုးတကျနသေညျ့ ပတျဝနျးကငြျတှငျ ဥပဒသေတျမှတျခကြျအသစျမြားနှငျ့ နညျးပညာဆိုငျရာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုမြားအလိုကျ ကြှနျုပျတို့၏ စညျးမဉြျးမြားနှငျ့ လုပျငနျးစဉျမြားကို လိုကျဖကျညီအောငျ လငြျမွနျစှာ ပွငျဆငျနိုငျရနျ ကြှနုျပျတို့၏ လေးစားလိုကျနာရေး စနစျကို အဆကျမပွတျ လေ့လာသုံးသပျပါသညျ။
စညျးမဉြျးစညျးကမျးဆိုငျရာ ကိစ်စမြားအားအားတိုကျရိုကျ သတငျးပေးပို့ရနျ
Bosch လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အရေးပေါျဖုနျးလိုငျး
ပစ်စညျးပေးသှငျးသညျ့ ကုမ်ပဏီမြားအတှကျ ကငြ့ျဝတျစညျးကမျး
လေးစားလိုကျနာမှုဆိုသညျကို ကြှနျုပျတို့ မညျသို့ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ပါသလဲ?
လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျသညျမှာ ဥပဒမြေားနှငျ့ ကုမ်ပဏီ၏ စညျးမဉြျးစညျးကမျးမြားအား လိုကျနာခွငျးကို ဆိုလိုပါသညျ။ တစျနညျးအားဖွငျ့ Bosch Group နှငျ့ ၎င်းငျးအဖှဲ့အစညျးမြား၏ လုပျငနျးဆောငျရှကျခကြျအားလုံးသညျ တရားဥပဒဆေိုငျရာ သတျမှတျခကြျအားလုံး၊ လုပျငနျးကငြ့ျဝတျနှငျ့ အခွားအကြုံးဝငျသော လမျးညှှနျမြားနှငျ့ မညျသညျ့ပုံစံနှငျ့မဆို ဤခေါငျးစဉျနှငျ့ စပျလဉြျးသညျ့ အခကြျအခြာကသြော ညှှနျကွားခကြျအားလုံး ("လေးစားလိုကျနာရေးဆိုငျရာ မူဝါဒ") ကို လိုကျနာဆောငျရှကျရပါမညျ။
ခြိုးဖောကျပါက လူတိုငျးအပေါျ — တိုကျရိုကျဖွစျစေ၊ သှယျဝိုကျ၍ဖွစျစေ — သကျရောကျမှု ရှိသောကွောငျ့ လေးစားလိုကျနာမှုဟူသော အကွောငျးအရာသညျ ဝနျထမျးအားလုံးနှငျ့ သကျဆိုငျသညျ့ အကွောငျးအရာမြားထဲမှ တစျခု ဖွစျသညျ၊ အခွားတစျဖကျတှငျလညျး ဥပဒကေို ခြိုးဖောကျပါက အမှု၏ ပွငျးထနျမှုအပေါျ မူတညျပွီး ပွစျမှုဆိုငျရာ တရားစှဲဆိုမှု ခံရနိုငျသညျအထိ ဖွစျနိုငျသညျ။ အခွားတစျဖကျတှငျလညျး လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အခွခေံမူမြားကို ခြိုးဖောကျပါက ကုမ်ပဏီကို ငှရေေးကွေးရေးအရ အန်တရာယျ ဖွစျစနေိုငျသညျ့အပွငျ ၎င်းငျး၏ ဂုဏျသတငျးကြောျကွားမှုကိုလညျး ထိခိုကျစနေိုငျသညျ။ ရလဒျသညျ ကုမ်ပဏီ၏လုပျငနျး အကြိုးထိရောကျမှုကို ထိခိုကျပကြျစီးစနေိုငျသညျ့အတှကျ အောငျမွငျမှုကိုပါ ထိခိုကျနိုငျပါသညျ။ လေးစားလိုကျနာမှုသညျ Bosch နှငျ့ ပွငျပမှ အဖှဲ့အစညျးမြားအကွား လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ ဆကျဆံရေးမြားအပေါျတှငျလညျး သကျဆိုငျမှု ရှိပါသညျ : လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အခွခေံမူမြားကို ပွငျပ အဖှဲ့အစညျးမြားမှ ခြိုးဖောကျရာတှငျ Bosch က ပါဝငျလိုခွငျးမရှိပါ။
လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ သတျမှတျခကြျကို ခြိုးဖောကျပါက မညျသို့ လုပျဆောငျသငျ့ပါသလဲ?
လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အခွခေံမူမြားကို ခြိုးဖောကျနိုငျခွရှေိသညျ့ ကိစ်စရပျအားလုံးကို တိုငျကွားခွငျးသညျ ဝနျထမျးအားလုံးအပေါျ မူတညျပါသညျ၊ ဤနညျးအားဖွငျ့ ထိုသို့သော ခြိုးဖောကျမှုမြား၏ နောကျဆကျတှဲ အကြိုးဆကျမြားကို လြှော့ခနြိုငျပွီး အနာဂတျတှငျ အလားတူ မှားယှငျးသညျ့ အပွုအမူမြိုး မဖွစျပှားအောငျ တားဆီးနိုငျမညျ ဖွစျသညျ။ ၎င်းငျးသညျ လုပျငနျးမိတျဖကျမြားနှငျ့ ပွငျပအဖှဲ့အစညျးမြားအပေါျသို့လညျး သကျရောကျမှု ရှိပါသညျ။
လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အခွခေံမူကို ခြိုးဖောကျနပေါက မညျသူက တိုငျကွားနိုငျပါသလဲ?
• အလုပျသငျမြားနှငျ့ Ph.D ကြောငျးသားမြားအပါအဝငျ ဝနျထမျးအားလုံး
• တစျဆငျ့ခံ စာခြုပျခြုပျဆိုထားသော အလုပျသမားမြား သို့မဟုတျ ပွငျပမှ ဝနျဆောငျမှုပေးသူမြားအတှကျ အလုပျလုပျနသေော ဝနျထမျးမြားကဲ့သို့ ပွငျပမှ အလုပျခနျ့အပျထားသော ပုဂ်ဂိုလျမြား
• ပစ်စညျးသှငျးသညျ့ ကုမ်ပဏီမြား၊ ဖောကျသညျမြား သို့မဟုတျ ဖကျစပျလုပျငနျးမိတျဖကျမြားကဲ့သို့ လုပျငနျးမိတျဖကျမြား
• ပွငျပမှ မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးမဆို
မညျသို့သော ခြိုးဖောကျမှုမြားကို တိုငျကွားသငျ့သလဲ?
ခိုးမှု၊ လိမျလညျမှု သို့မဟုတျ လာဘျပေးလာဘျယူမှုကဲ့သို့ — ရာဇဝတျမှုဆိုငျရာ ပွစျမှုကြူးလှနျထားသညျဟု ညှှနျပွသော — သို့မဟုတျ အရညျအသှေး သို့မဟုတျ ဘေးကငျးရေးဆိုငျရာ အခွခေံစံနှုနျးမြား သို့မဟုတျ လုပျငနျးကငြ့ျဝတျစညျးကမျးကို တမငျရညျရှယျပွီး အဆကျမပွတျ လေးစားလိုကျနာမှု မရှိခွငျးကဲ့သို့ ဥပဒဆေိုငျရာ သို့မဟုတျ ကုမ်ပဏီ၏ ရုံးတှငျးစညျးမဉြျးမြားကို စနစျတကခြြိုးဖောကျသညျ့ ကိစ်စရပျမြားကို တိုငျကွားရနျ အရေးကွီးပါသညျ။
သကျသမေရှိသောျလညျး သံသယရှိသညျ — ကိစ်စရပျကို တိုငျကွားသငျ့ပါသလား?
တိုငျကွားသငျ့ပါသညျ။ လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အရာရှိမြားသညျ စုံစမျးစစျဆေးမှုမြားပွုလုပျခွငျး၊ တရားရုံးတှငျ ရငျဆိုငျရသညျ့အခါ အကူအညီဖွစျစမေညျ့ အထောကျအထားမြားကို စုစညျးခွငျးနှငျ့ လိုအပျနိုငျသညျ့ မညျသညျ့ တရားစှဲဆိုမှုမြားကိုမဆို စတငျပွုလုပျခွငျးတို့ လုပျဆောငျရနျ တာဝနျရှိသညျ။ ၎င်းငျးတို့သညျ လိုအပျသညျ့အလြောကျ လေ့ကငြ့ျသငျကွားမှုရရှိထားပွီး သကျဆိုငျရာ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ ရှိသော အထူးပညာရှငျဌာနမြားရှိ ကြှမျးကငြျသူမြားထံမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရရှိကွသညျ။
ခြိုးဖောကျမှုမြားကို တိုငျကွားသူသညျ ယငျးကိစ်စရပျ၏ ဂယကျရိုကျမှုကို ခံရနိုငျပါသလား?
လေးစားလိုကျနာမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး ပွဿနာရှိနိုငျသညျ့ ကိစ်စရပျမြားကို မိမိ သိသလောကျ၊ စိတျရငျးမှနျဖွငျ့ တိုငျကွားသူသညျ မိမိ၏ လုပျရပျမြားကွောငျ့ ကုမ်ပဏီမှ အန်တရာယျပေးမညျကို ကွောကျရှံ့ရနျ မလိုပါ။
မိမိ၏ အမညျကို မဖောျပွဘဲ တိုငျကွားစာမြား ပို့နိုငျပါသလား?
ပို့နိုငျပါသညျ၊ Bosch ၏ လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အရေးပေါျဖုနျးလိုငျးမှတစျဆငျ့ တိုငျကွားစာမြားကို မိမိအမညျမဖောျပွဘဲ ပေးပို့နိုငျပါသညျ။ တာဝနျရှိ လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အရာရှိနှငျ့အတူ မိမိအမညျမဖောျပွဘဲ အပွနျအလှနျဆကျသှယျရနျ အရေးပေါျဖုနျးလိုငျးအတှငျး စိတျခလြုံခွုံရသညျ့ စာပုံးကို စီစဉျသတျမှတျထားနိုငျပါသညျ။
တိုငျကွားစာကို အတိအကအြားဖွငျ့ မညျသို့ လုပျဆောငျမညျလဲ?
တိုငျကွားထားသညျ့ ခြိုးဖောကျမှုမြားကို စုံစမျးစစျဆေးရနျနှငျ့ အဆိုပါကိစ်စရပျကို သငျ့လြောျစှာ ဖွရှေငျးကွောငျး သခြောစရေနျ လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အရာရှိတှငျ တာဝနျရှိသညျ (လိုအပျပါက Bosch အထူးပညာရှငျ ဌာနမြား သို့မဟုတျ ပွငျပမှ အထူးပညာရှငျမြား၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရယူရနျ လိုအပျသညျ)။
မှတျတမျးတငျခွငျးနှငျ့ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု ရှိခွငျး
ခြိုးဖောကျမှုဖွစျနိုငျခွရှေိကွောငျး တိုငျကွားစာအပွငျ နောကျဆကျတှဲ ဆောငျရှကျခကြျမြားကို လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ အရာရှိက မှတျတမျးတငျထားရမညျ။ ပါဝငျသူမြား၏ တရားဝငျအကြိုးဖွစျထှနျးမှုကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားလကြျ ကိစ်စရပျကို အစီရငျခံသူသညျ စုံစမျးစစျဆေးမှုအခွအေနကေို စုံစမျးနိုငျသညျ။ သကျဆိုငျရာ မှားယှငျးသညျ့အပွုအမူကို မတှေ့သညျ့အတှကျ ကိစ်စရပျကို စုံစမျးစစျဆေးမှုအား စှနျ့လှှတျလိုကျရလြှငျ စုံစမျးစစျဆေးမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး မှတျခကြျပေးရနျ သို့မဟုတျ အခကြျအလကျမြားကို ပံ့ပိုးပေးရနျ တောငျးဆိုလကြျ သကျဆိုငျသညျ့ပုဂ်ဂိုလျကို သငျ့လြောျစှာ အကွောငျးကွားမညျဖွစျပါသညျ။
လေးစားလိုကျနာမှုအတှကျ ဖွစျနိုငျသညျ့ ခြိုးဖောကျမှုမြားကို တိုငျကွားရာတှငျ ကိုယျရေးကိုယျတာအခကြျအလကျမြားကို ပုံမှနျအားဖွငျ့ ထုတျဖောျပွောပွလေ့ရှိပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ထိုသို့သော တိုငျကွားစာမြားကို လကျခံပွီး စီမံဆောငျရှကျရာတှငျ တိုငျကွားခကြျပွုလုပျသူမြားကို ဒတောလုံခွုံရေး ဥပဒမြေားအောကျရှိ ၎င်းငျးတို့၏ ရပိုငျခှငျ့မြားနှငျ့ပတျသကျ၍ အကွောငျးကွားရမညျဖွစျပွီး လေးစားလိုကျနာမှုဆိုငျရာ ကိစ်စရပျကို စုံစမျးစစျဆေးရာတှငျ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျရေးအခကြျအလကျမြားကို အသုံးပွုမညျကို သဘောတူရနျ လိုအပျပါသညျ။ မညျသူမညျဝါ မဖောျပွဘဲ တိုငျကွားသညျ့ဖွစျစဉျတှငျ ဤအခကြျက သကျရောကျမညျ မဟုတျပါ။
Bosch အကွောငျး နောကျထပျရှာဖှရေနျ